Porn ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - ကျွမ်းကျင်သူများပြောနေသည့်အရာ (The Porn Effect) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်
Erectile အလုပ်မဖြစ်သွေးဆောင် porn: အကျွမ်းကျင်သူများက (အဆိုပါ porn Effect) ဟုနေကြသည်ကဘာလဲ
ငါဒီဆောင်းပါးကိုအကြောင်းပြချက်နှစ်ခုနဲ့အတူတူထားလိုက်တယ်။ ပထမတစ်ခုကမင်းကယောက်ျားလေးကိုညစ်ညမ်းမှုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်၊ မင်းကဘာဖြစ်လို့ရပ်တန့်သင့်တာလဲဆိုတာကိုတကယ်အစွမ်းထက်တဲ့၊ စိတ် ၀ င်စားတဲ့အငြင်းအခုံတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်အမြင့်မြတ်ဆုံးအကြောင်းပြချက်မဟုတ်သော်လည်းဟေး၊ အစဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြောင်းပြချက်မှာဘာသာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ညစ်ညမ်းသောဆိုးကျိုးများကိုအခြားသူများအားစည်းရုံးလိုသောသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သောကိုးကားချက်များနှင့်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုချင်းစီသည်သင်၏အဆင်ပြေမှုအတွက်အောက်ခြေတွင်မှတ်သားထားခြင်းခံရသည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း Clay Olson မှကျေးဇူးတင်ပါတယ် The New မူးယစ်ဆေးတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဤအတွေ့ရှိချက်အချို့ကိုဖို့ကျွန်မကိုညွှန်ပြဘို့။
ကျွမ်းကျင်သူများကအားဖြင့် 10 တွေ့ရှိချက်
1. ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားနေရသောလူငယ်များမည်မျှရှိသည်ကိုအတိအကျသိရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ဟာအသစ်ဖြစ်တာမဆန်းဘူးဆိုတာရှင်းပါတယ်။  - ဒေါက်တာအာဗြဟံသည် Morgentalerဟားဗတ်ဆေးကျောင်းမှာ Urology ၏, လက်တွေ့ပါမောက္ခ
2. ယောက်ျားသည်သူ၌ရှိသောလိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာသည်နှင့်အမျှယောက်ျားမည်မျှကြည့်နေသည်ကိုငါပြောပြနိုင်သည်။ ။ ။ ။ မကြာခဏတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသူတစ် ဦး သည်သူနှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်သည့်အခါမကြာမီစိုက်ထူခြင်းပြdevelopနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းသည့်အရာများတွင်ပေါင်းထည့်ပါ၊ သူသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ။ ။ ။ ကွဲပြားခြားနားသောနှိုးဆွသောအခါတစ် ဦး လျင်မြန်စွာသုတ်ရည်လွှတ်ဆီသို့ ဦး ဆောင်အာရုံခံစားမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်မျိုးမှလေ့စိုက်ပျိုးသောလိင်တံတူအလားတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အော်ဂဇင်ကိုနှောင့်နှေးတာဒါမှမဟုတ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ”  - ဒေါက်တာဟယ်ရီ FischWeill Cornell Medical College မှ Urology လက်တွေ့ပါမောက္ခဖြစ်သည်
3. ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတုံ့ပြန်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်စတင်သည်။ ထိုအခါယေဘူယျအားဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကျဆင်းလာပြီး၊  - Carlo Forestaအီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာသမ္မတဟောင်း။
4. အီတလီမှာ, အထူးသ porn မှာရှာဖွေနေသုတေသနနှင့် 19 မှယောက်ျားအသက်အရွယ် 25 အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအပေါ်သက်ရောက်မှုမဟုတ်သောစဉ် (1 အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခြင်း) 10 မှ 10 ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဆင့်တစ်စကေးပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ 4.21 တစ်ရမှတ်ပျမ်းမျှတွေ့ရှိခဲ့ porn အသုံးပြုသူများအ 8.02 မှာရောက်လာတယ်။ Erectile function ကို Non-အသုံးပြုသူများကိုနှိုင်းယှဉ် porn အသုံးပြုသူများသည်သူတို့တွင်လည်း 30 ရာခိုင်နှုန်းကအနိမ့်, အညစ်ညမ်းအပေါ်ရှိသူများကိုလည်းခြုံငုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အော်ဂဇင် function ကိုအပေါ်အနိမ့်ရမှတ်များရရှိခဲ့သည်။ 
5. ကိန်းဘရစ်ခ်ျတက္ကသိုလ်တွင်ပြုလုပ်သောလေ့လာမှုအရညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုစွဲကပ်နေသောယောက်ျားများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဘာသာရေး၏ထက်ဝက်ကျော်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအသုံးပြုသောပစ္စည်းများကြောင့်အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ။ ။ အထူးသဖြင့်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာနှင့်မပတ်သက်သော်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုလျော့နည်းသွားခြင်း။ 
6. “ Viagra လိုဆေးတွေကဇီဝကမ္မဗေဒတစ်ခုခုကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကသန္ဓေသားကိုသွေးစီးဆင်းစေနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်နိုင်တာက ဦး နှောက်ဖြစ်တဲ့လိင်အင်္ဂါကိုအများဆုံးလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဦး နှောက်ကိုအာရုံလွဲသွားတဲ့အခါမင်းကမတိုက်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးတယ်။ အချို့သောအမျိုးသားများသည်ကုသမှုခံယူနိုင်သည့်ဤသူများ၌ပင် 'ငါကောင်းကောင်းမွန်မွန်စိုက်ထူရမယ်' ဟုပင်ပြောလိမ့်မည်။ ထိုစိုက်ထူမှုနှင့်အတူပင်သူတို့သည်မခံစားနိုင်ဟုခံစားရသည်။ သူတို့မပျော်ဘူး ဒီတော့ဒါကအပျော်အပါးကိုမကုသဘူး၊ သူတို့ကငါလိင်ဆက်ဆံတာကိုတခြားတစ်ယောက်ယောက်ကိုကြည့်နေတာလား၊ ငါအတွေ့အကြုံကနေခွဲထွက်ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကဒီ ဦး နှောက် - လိင်တံမတိုက်ဆိုင်မှုကိုဖန်တီးလိုက်တာနဲ့ ဦး နှောက်ဟာစိုက်ထူမှုတစ်ခုရဖို့ဒါမှမဟုတ်မရနိုင်ရင်တောင်မှပျော်ရွှင်မှုကိုမခံစားရတဲ့နေရာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။ ”  - ဒေါက်တာ Andrew Kramer
7. သုတေသီများပင်အလယ်အလတ် porn အသုံးပြုမှုကိုဦးနှောက်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတစ်လျှော့ချတုံ့ပြန်မှုရှိခြင်းဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့တွေ့ပြီ။ ဒါကြောင့်အဖျားကြောင့်ညစ်ညမ်းပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သောမပြခဲ့ပါဘူးနေစဉ်, သောသုတေသီများအများဆုံးဖွယ်ရှိတွေ့ရှိခဲ့သီအိုရီဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပင် "Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ " သူတို့လေ့လာမှုစာတန်းထိုး 
8. ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုစဉ်ဆက်မပြတ် porn မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဆက်သွယ်ထားသောဦးနှောက်မြေပုံများအားခိုင်ခံ့စေသောအခါထိုမြေပုံအမှန်တကယ်လူတစ်ဦးသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်လိင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားချိတ်ဆက်မြေပုံထုတ်ကျယ်စေနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့လူအစုအဝေး။ 
9. အီတလီမှာသုတေသီများမျှသိသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမရှိရှိခဲ့ရာအဘို့ ED နှင့်အတူယောက်ျား၏ဦးနှောက် Scan ဖတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဦးနှောက် (လျော့ချ dopamine အချက်ပြကိုဆိုလိုသည်) ကိုဆုလာဘ်စင်တာအတွက်လျှော့မီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့် hypothalamus များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်တာများပြတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  Porn မီးခိုးရောင်ကိစ္စလျှော့ချဘဲလျက်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ 
10 ။ ဆရာဝန်များနှင့်အတိတ် porn အသုံးပြုသူများကိုနောက်ကွယ်မှ porn ထွက်ခွာ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မတွေ့ပြီ။ 
ငါ၏အငါ၏အထွက်စစ်ဆေး အင်တာဗျူး ဂါနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု porn-သွေးဆောင် ED ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြဘယ်လိုယူဆပါသည်။
Matt Fradd ခြင်းဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး